သတိပေးအဝတ်အစား→အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအဝတ်အစား• P&M ကွန်ပျူတာပန်း
သတိပေးအဝတ်အစားများကိုကြော်ငြာခြင်းသည်အလုပ်ခွင်နှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင်အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ Kamizelki ၎င်းတို့ကိုအချို့အားကစားပွဲများကိုစီစဉ်သူများသို့မဟုတ်ကလပ်များကရွေးချယ်သည်။ အထူးသဖြင့်ထိုနေရာတွင်အများပြည်သူသွားနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်၊ ဥပမာအပြေးသမားများအတွက်စက်ဘီးပြိုင်ပွဲများသို့မဟုတ်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲများဖြစ်သည်။
ငါတို့ရဲ့ ဆိုင် bookmark ထဲမှာ "ကြော်ငြာအဝတ်အစား - သတိပေးအဝတ်အစား"ကျွန်ုပ်တို့သည်စံပြစွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များရှိသောမော်ဒယ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့မူလတာ ၀ န်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးညနေခင်းတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်သောအစင်းများကြောင့်မြင်သာမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
မြင်သာမြင်သာသောအ ၀ တ်အထည်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအားဖြင့်ရောင်ပြန်အင်္ကျီများကိုယူနီဆက်ပုံစံများရှိအရွယ်ရောက်သူများအတွက်သာမကကလေးများအတွက်ပါပေးသည်။ ရရှိနိုင်မော်ဒယ်များနှစ် ဦး စလုံးဆွဲထားခြင်းနှင့် ဦး ခေါင်းကျော်ပေါ်တွင်တင်နေကြသည်။ သူတို့၏ပေါ့ပါးမှုကြောင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သည့်ရာသီဥတုဖြစ်စေ၊ နွေနှင့်ဆောင်းရာသီအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ပစ္စည်းသည်အသုံးပြုသူနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လွယ်ကူစွာပေါင်းစပ်နိုင်သည် အင်္ကျီမှခေါင်းစွပ်, အနွေးထည် သို့မဟုတ် ပိုလိုရှပ်.
အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများ, တစ် ဦး ချင်းစီဒီဇိုင်း
အကြီးမားဆုံးသောအားသာချက်တစ်ခုမှာယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြစ်သည် စျေးနိမ့်။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုနိမ့်ကျသောစျေးနှုန်းကိုဂရုစိုက်သူများသို့မဟုတ်ဘတ်ဂျက်အနည်းငယ်သာရှိသူများအတွက်အထူးသင့်လျော်သောအဖြေတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီဇိုင်းနှင့်အပ်ချုပ် သတိပေးအဝတ်အစားကိုကြော်ငြာ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့သူတွေကိုစိတ်ကျေနပ်စေမယ့်ကံကြမ္မာကိုမကုန်ကျပါဘူး။
နှင့်အတူအပိုဆောင်းအမှတ်အသားဖြစ်နိုင်ခြေ ကွန်ပျူတာပန်း သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း ခွင့်ပြုမယ် တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေး.
အသုံးပြုသူသည်အခြားကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များကြားတွင်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးမှကန်ထရိုက်တာများအလုပ်လုပ်သည့်ဂိုဒေါင်တစ်ခုတွင်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်များစွာပါ ၀ င်သည့်အားကစားပွဲများပြုလုပ်နေစဉ်။ ပွန်းစားခြင်းမှခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်၎င်းတို့သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာမပျက်စီးနိုင်ပါ။ ဤအရည်အသွေးသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်အမြင်အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်လိမ့်မည်။
ရောင်ပြန်ဇစ်ချွေးထွက်အင်္ကျီအင်္ကျီသတိပေးအင်္ကျီရောင်ပြန်ဟပ်တီရှပ်ရောင်ပြန်ဂျာကင်အင်္ကျီအကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုသတိပေးHigh-visibility အဝတ်အစားhigh-visibility allegro အဝတ်အစားHigh-visibility အဝတ်အစားhigh-visibility အဝတ်အစား ciopယာဉ်မောင်းများအတွက်သတိပေးအဝတ်အစားမြင့်မားသောမြင်သာမြင့်မားတဲ့မြင်ကွင်းအဝတ်အစားမြင့်မားသော - မြင်သာရောင်ပြန်အဝတ်အစားမြင့်မားသောမြင်သာသိုးအဝတ်High-visibility အဝတ်အစားထုတ်လုပ်သူhigh-visibility အဝတ်အစား Warsawပုံနှိပ်နှင့်အတူ High- မြင်နိုင်အဝတ်အစားမြင့်မားသော - မြင်နိုင်သော workwearမြင့်မားသောမြင်ကွင်းအလုပ်အဝတ်3m အဝတ်အစားသတိပေးတိပ်အဝတ်အစား 3m များအတွက်ရောင်ပြန်သတိပေးတိပ်
5 /5( 11 မဲ )